Diraama - Xalayaa
Home / Archive by category "Diraama"
24 Apr 2016 Kan maxxanse Naa'ol
Diraama Dambalii Diraama Dambalii televishiina OBS irra kan tamsaa'a ture dha. Diraaman kun namoota baayye dhan kan jaalatame ture. Garuu, sababa hanqina qarshii fi ispoonsara dhabuun gidduu dhaan dhaabbateera. Diraaman kun gidduutti osoo hin xumuramiin dhaabbachunsaa baayye kan nama gaddisiisu dha,...
Diraama Ilkee Diraama Ilkee televishiina Oromiyaa kan tamsaa'a ture dha. Dhuma Bara 2013 hanga 2014 gidduutti kan waraabame yoo ta'u Kutaale 31 qofaatu qilleensarra oole. Diraaman kun utuu hin xumuramiin sababaa masterplaani Finfineerra kan ka'e gidduun kan addaan dhaabbate dha. Barreessaa diraama...